Senior Sales Executive(Farming Equipment) | Job in Myanmar ﻿
23.7.2020, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
ကုမ္ပဏီ: Shwe Phon Co.,Ltd
•	ရိတ်ခြွေစက်အကြောင်းနှင့် အရောင်းပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ရွှေညောင်၊ ဟင်္သာတ၊ မြို့တို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	CV လျှောက်သည့်အခါ ထမ်းဆောင်လိုသည့် မြို့ကို ( ) ဖြင့် ရေးလျှောက်ပါ။
•	Age between 20-30 (Male Only)
•	Must have minimum two years’ experience in related filed.
•	Must be self-motivated, talented.
•	Must be do well planning and get achievement.
•	Must be familiar with Harvester.
ကျွန်တော်တို.ကမ်းလှမ်းသည် •	Male.
အလုပ်တည်နေရာ Kyulsekan9Street 80/83,Pyi Gyi Tagon,Mandalay.
622 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Sales & Business Development jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Sagaing Region
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Sales & Marketing Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Mandalay City
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Media,Digital & Creative jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Mandalay City
703 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
နေရာဒေသအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Ayeyarwady Region
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Sales & Marketing Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Ayeyarwady Region
နေရာဒေသအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Magway Region
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Sales & Marketing Jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Magway Region
704 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
712 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်ကြော်ငြာများ Customer Service & Call Centre jobs နှင့် နေရာဒေသရှိ Mandalay Region
731 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , Distribution / Logistic
Senior Sales Executive(Farming Equipment) Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Shwe Phon Co.,Ltd Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Distribution/Logistic မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Yangon (Rangoon) 273 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 699 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 710 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 731 နေ့များ
Yangon (Rangoon) 790 နေ့များ